एमालेका मधेसी सांसद पनि संविधान संशोधनको पक्षमा आउँछन् - Karobar National Economic Daily
एमालेका मधेसी सांसद पनि संविधान संशोधनको पक्षमा आउँछन्
query_builderJanuary 8, 2017 10:31 AM supervisor_account visibility3281
वृषेशचन्द्र लाल, उपाध्यक्ष, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष हुन्— वृषेशचन्द्र लाल । संविधानसँग असन्तुष्टि राख्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता लाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पास हुने बताउँछन् ।
संशोधन विधेयक टेबुल भए एमालेकै मधेसी सांसदले समेत विधेयकको पक्षमा भोट हाल्ने उनको विश्वास छ । संशोधन विधेयकले आफूहरूको केही महत्वपूर्ण माग पूरा गरे पनि सबै माग पूरा नगरेकाले परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
संशोधन विधेयक विदेशीको इसारामा आएको भन्ने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता खण्डित गरेको उनको आरोप छ । आफूहरू नेपाली–नेपालीबीचको सद्भाव बढाउने पक्षमा भएको तर एमालेले उग्र राष्ट्रवादको नारा जपेर जनताबीचको आपसी सद्भाव बिगार्न खोजेको उनी बताउँछन् ।
देश परिवर्तन गर्न नेपाली जनता पटक–पटक सडकमा उत्रिए पनि जनताको अधिकार स्थापित गर्न नसक्दा देशको विकास हुन नसकेलाले अहिले देखिएका सबै राजनीतिक समस्या हल गरेर सबै मिलेर आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । नेता लालसँग संविधान संशोधन विधेयक, संविधान कार्यान्वयन, मोर्चाका भावी रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्ण र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीः
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले बीपी कोइरालाले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँको सोच जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्नु थियो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ र जनताले नै संविधान बनाउनुपर्छ ।
राजनीतिदेखि लिएर राज्यका सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने देखाउनका लागि त्यो मान्यता स्थापित गर्न उहाँले संविधानसभाको कुरा उठाउनुभएको थियो । तर, त्यतिबेलाको परिस्थितिले संविधानसभा गठन हुन सकेन । त्यसपछि माओवादीहरूले संविधानसभाको कुरा उठाए । पछि गएर सबै दलले यसलाई स्वीकार गरे ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि त्यो सबैको साझा दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने हो । यहाँ भ्रम के फैलाइँदै छ भने मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिले संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनमा बाधक बनेका छन् भन्ने खालका भ्रम फैलाइँदै आइएको छ ।
हामी के चाहन्छौं भने यो संविधान सबैको दस्तावेज बनोस् र सबैले यसलाई आफ्नो संविधानका रूपमा स्वीकार गरून् । त्यसका निम्ति यो संविधानमा सबैको भावना, सबैको आकांक्षा र सबैलाई समान अधिकार समावेश होस् भन्ने हाम्रो मूल माग हो ।
नेपालको राजनीतिक परम्परा हेर्दा हरेक कुराको निर्धारण सत्ताको खेलअनुसार हुन्छ र यो संविधानको निर्माण पनि सत्ताको खेललाई सर्वोपरि ठानेर भएको हो । एउटा बन्द कोठामा तीन प्रमुख दलले १६ बुँदे सहमति गरेर सत्ताको खेलमा लागेर सबै पक्षको कुरै नसुनी संविधान निर्माण गरियो ।
हामी यो संविधानमा हाम्रा अधिकार स्थापित गर्न चाहन्छौं । अहिले सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । त्यसले हाम्रा सबै मागलाई सम्बोधन त गर्दैनन् । तर, हाम्रा केही महत्वपूर्ण मागलाई यसले पहिल्याएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
यो देशलाई मजबुत बनाउने हो, जनताबीचको एकतालाई बलियो बनाउने हो भने सबै राजनीतिक दलले आपसमा सहमति गरेर यी बुँदालाई पास गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ र यो संशोधन विधेयक पारित गराउनुपर्छ । हामीले त यसमा अझ परिमार्जनको जरुरी छ पनि भनेका छौं । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाऔं, देशको एकतालाई मजबुत बनाऔं भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
संशोधन विधेयक राष्ट्रहितविपरीत छ भनेर नेकपा एमालेसहितका विपक्षी नौ दलले सरकारलाई फिर्ता लिन दबाब पनि दिइरहेका छन् नि ?
नेकपा एमालेको अहिलेको राजनीतिक क्रियाकलाप अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, अलोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीविपरीत छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वले संसद् र देशका विभिन्न ठाउँमा दिएका अभिव्यक्ति राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने खालका छन् । एमालेका शीर्ष नेताहरूले गालीगलौजका भाषा प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।
अहिले एमालेले निकालेका जुलुसहरूमा राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग भइरहेको छ । राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग कसको विरुद्धमा गरिएको हो ? मधेसी, थारु आदिवासी जनजाति कसको विरुद्धमा ? एउटा ठूलो सवाल के उठ्छ भने जब मधेसी, थारु आदिवासी जनजातिका विरुद्धमा एउटा प्रमुख राजनीतिक दलले राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्छ भने मधेसी, थारु आदिवासी जनजातिले कुन झन्डा प्रयोग गर्ने त ?
एमालेले दूरी बढाउने काम गरेको छ । हामी त अहिले पनि यो दूरी कम गर्न चाहन्छौं । हामी जनता–जनताबीचको आपसी सद्भाव बलियो बनाउन चाहन्छौं । एमाले त्यो सद्भावलाई बिगार्न चाहन्छ । उसले त्यसो किन गरिरहेको छ भने सत्ताका लागि हो । सत्ताकै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् ।
जिम्मेवार ढंगले राष्ट्रिय मुद्दामा एमाले आओस् र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने दिशामा सबै एक हौं भन्ने हाम्रो चाहना हो । एमालेले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेको छ । यसको मतलव एमाले यो संविधान स्विकार्ने अवस्था निर्माणको बाधक बनेको छ । यो राम्रो होइन ।
५ नम्बर प्रदेश विभाजनको कुरालाई लिएर विरोध भइरहेको छ । एकथरीले पहाडबाट मधेस टुक्र्याएर भारतमा विलय गराउने षड्यन्त्र हो र मधेसी मोर्चाको माग पनि तराईलाई भारतमा गाभ्ने रणनीतिकै साथ आएको हो भन्ने आरोप लगाएका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
२ नम्बर प्रदेश तराईका जिल्ला मात्रै भएको प्रदेश हो । यसको मतलब केपी ओलीलगायतका नेताहरू जो अहिले मधेसका जिल्ला छुट्ट्याउन हुँदैन भनिरहनुभएको छ र पहाडबाट मधेस छुट्ट्याएर भारतमा विलय गराउने षड्यन्त्र भयो भनिरहनुभएको छ । के उहाँहरूले २ नम्बर प्रदेश नेपालबाट अलग गर्नकै लागि बनाउनुभएको हो ? पक्कै होइन होला ।
संघीयताका दुई मूल आधार छन् । संघमा सबै एकबद्ध भएर बस्ने र आ–आफ्नो प्रदेशमा स्वशासनको अधिकार प्रयोग गर्दै त्यहाँको विकास गर्ने भन्ने हो । तराईको आफ्नै विशेषता छ, पहाड र हिमालको पनि आफ्नै विशेषता छ । भौगोलिक रूपमा तराईलाई प्रकृतिले नै छुट्ट्याइदिएको छ । जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भने तराईमा भएको विविधता, पहाड र हिमालमा छैन ।
तराईमा, मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य पनि छन् । धार्मिक हिसाबले पनि विविधता छ । हामीले मधेसलाई मधेस प्रदेशका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको कारण मधेसमा बसोबास गर्ने जनता मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिसँगै त्यहाँका नेपाली भाषी जनसंख्यामाथि पनि विभेद भएको छ ।
सबैलाई एकैनासले विभेद भएको छ । यहाँ पहिचानको सवाल छ । हामीले यो खोजेका हौं कि नेपालका सबै क्षेत्रका जनता समान हुन् । सबैलाई समान अधिकार चाहिन्छ । मेरो विचारमा तराईलाई पहाडबाट अलग गर्न हुँदैन भन्ने सोच महेन्द्रवादी सोच हो । र, सत्तामा सधैं आफ्नो वर्चस्व खोज्नेहरूको सोच हो ।
मधेसका जिल्लालाई छुट्ट्याएर त्यसमा स्वशासन दिनुको अर्थ देशको अखण्डतामाथि खतरा ल्याउनु हो भन्ने जुन तर्क छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन र त्यो एउटा वर्चस्ववादी तर्क हो । सबै क्षेत्रका जनताले स्वशासनको अधिकार पाएपछि नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ । यी सबै भ्रम जनतामाझ उग्रराष्ट्रवादी नारा लगाएर सत्तामा कब्जा गरिरहने रणनीतिअन्तर्गत भइरहेका छन् । यसले देशको भलो गर्दैन ।
उसो भए एमालेले महेन्द्रवादी कुरा गरेर संघीयताको विरोध गरिरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले पनि संघीतालाई मनैदेखि स्वीकार गरेको छैन । संघीयता स्वीकार गर्नु कांग्रेस र एमालेको बाध्यता बन्यो । जनताको आकांक्षालाई दबाउन नसकेर उनीहरू संघीयताका पक्षमा आएका हुन् । माओवादीले पनि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दाताका संघीयताको एजेन्डा छोडेकै हो ।
यो नौलो कुरा होइन । अझ एउटा कुरा के प्रस्ट हुँदै गइरहेको छ भने तीन दलले संविधानको निर्माण गर्दा संघीय संरचना बनाउने विषयमा कतै न कतै यस्ता विवाद खडा गर्नुपर्छ ताकि यो संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसकोस् भन्ने खालको गतिविधि गरे ।
त्यस हिसाबले पनि मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण गरिएको हो । त्यसको विरुद्धमा यति ठूलो आन्दोलन भयो । विभिन्न बखेडा झिकेर संघीयता फाल्न एमालेलगायतका दलहरूले कसरत गरिरहेका छन् ।
सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा यहाँहरूले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइरहनुभएको छ । चार बुँदामा के पुगेन र के थप्नुपर्‍यो ?
सबैभन्दा मूल कुरा त सीमांकनको हो । सीमांकन गर्दा एउटा निश्चित आधारलाई हामीले मान्नुपर्छ । संविधानसभा–१ मा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सबैको सहमति भएको थियो । त्यसबेला राज्य पुनर्संरचना र शक्तिको बाँडफाँड आयोगले १४ प्रदेशको प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।
त्यसमा हाम्रो विमति भए पनि अघि बढेको थियो । त्यसमा दुई मधेस प्रदेशको कुरा थियो । त्यसलाई प्रमुख दलले पनि अघि बढाउन सहमति दिएका थिए । त्यसका आधारमा दुई मधेस प्रदेशको स्थापना होस् । या सबै दलको सहमतिमा राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले जुन प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसमा आधिकारिक र अल्पमतको प्रतिवेदन आएको थियो । ती दुवै प्रतिवेदनमा दुई मधेस प्रदेशको कुरा छ ।
त्यसैलाई आधार बनाएर सीमांकन परिमार्जन गरौं भन्ने हो । त्यस्तै वैवाहिक अंगीकृतको कुरा छ । मधेसका जनताले मात्रै भारतीयसँग विवाह गर्छन भन्ने छैन । पूर्व पहाड र पश्चिम पहाडका जनताले पनि भारतीयसँग विवाह गर्छन् । हामीले कसैसँग विवाह गर्दा तीनलाई वंशमा ल्याउँछौं । त्यो अंगीकृत होइन ।
त्यसैले त्यो वैवाहिक अंगीकृत भन्ने ठाउँमा वैवाहिक नाताले नागरिकता दिइनुपर्छ भन्ने हो । भाषाका कुरामा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेमा भनिएको छ । सरकारले गर्छ–गर्दैन भन्ने अस्पष्टता छ । भाषा आयोगको सिफारिसलाई थन्क्याउने काम नगरियोस् र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भन्ने हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चासँगको छलफलमा र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू तथा मोर्चाको छलफलमा उहाँहरूले आवश्यक परे परिमार्जन गर्ने र टेबुल गर्ने बताउनुभएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधन हालेपछि यो संविधानमा असन्तुष्टि छ भन्ने थप पुष्टि भएको छ ।
एमालेले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको अवस्थामा कसरी संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल हुन्छ र पास हुन्छ त ?
मलाई पूर्ण विश्वास छ । संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल हुन्छ र पारित पनि हुन्छ । राप्रपाका शीर्ष नेताहरूले यो विधेयकका विषयमा छलफल गरेर संशोधन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । राप्रपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।
मलाई लाग्छ, मधेसी जनधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ । मलाई लाग्छ, मधेसी जनताबाट निर्वाचित एमालेका सांसदहरू पनि यो प्रस्तावको पक्षमा आउँछन् । अहिलेसम्म उहाँहरू मौन बस्नुभएको छ । उहाँहरूले आफ्ना नेता तथा जनताको भावनालाई पनि हेरेर विश्लेषण गर्नुभएको होला ।
यदि एमालेका मधेसबाट निर्वाचित सांसदहरू यो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आएनन् भने उनीहरूले जनताको ठूलो दबाबको सामना गर्नुपर्छ । नेकपा एमालेको षड्यन्त्र के छ भने यो संशोधन विधेयक छलफलमा नै आउन नदिने । यदि यो विधेयक पास हुनै सक्दैन भने एमालेलाई छलफलमा ल्याउन दिन किन टाउको दुखाइ भयो त ?
छलफलमा आउनेबित्तिकै एमालेभित्र दबाब बढ्छ र मधेसी सांसदले विरोध गर्छन् भनेर उहाँहरूलाई सूचना आएकाले नै यो विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन नचाहेको हो ।
देश र जनताप्रति जिम्मेवार सबै राजनीतिक दलले प्रमुख र प्राथमिकतायुक्त राजनीतिक समस्या भएकाले यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ । संविधान सर्वस्वीकार्य भएन भने देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्छ । यो प्रतिकुलतालाई सम्झेर सबै दलले जिम्मेवारपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।
विधेयक पास भएपछि पनि केही समस्या रहन्छ । तर, ती समस्या संशोधनमार्फत समाधान हुने बाटो खुल्छ । यदि यो विधेयक पारित भएन भने पनि यो संविधानका बारेमा असन्तुष्टि छन् भन्ने औपचारिक रूपमा प्रमाणित हुन्छ । हाम्रो संघर्ष रहिरहन्छ । देशमा द्वन्द्व अन्त्य होस् भन्ने चाहना राख्ने राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन विधेयक पास गर्नुपर्छ । हामी पनि द्वन्द्वको समस्या होस् र एकताबद्ध भएर देश विकासमा लागौं भन्ने चाहन्छौं ।
यदि विधेयक अघि बढेन र बढे पनि फेल भयो भने मोर्चाले के गर्छ ?
हाम्रा एजेन्डा रहिरहन्छ । यदि फेल गराइयो भनेदेखि यो देशलाई स्थिरतातिर जान नदिने षड्यन्त्र छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन केही राजनीतिक दल चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हामी आगामी रणनीति तय गरेर हाम्रो माग सम्बोधनका लागि अझ बढी सक्रियताका साथ अघि बढ्छौं । तर, मलाई विश्वास छ, यो विधेयक पारित हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अबको १ वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दलहरू संशोधनकै विषयमा अल्झिएका छन् । यहाँलाई के लाग्छ, निर्धारित समयमै निर्वाचन भएर संविधान कार्यान्वयन होला ?
यदि निर्वाचन गराउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी भित्रैदेखि तयार छन् भने निर्वाचन सम्भव छ । तर, पहिले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ । संशोधनमार्फत संविधान सर्वस्वीकार्य बनाएपछि हामी पनि निर्वाचनमा भाग लिन्छौं । अहिले त विवाद खडा गर्ने काम मात्रै भएका छन् । अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम भएका छन् ।
तीन काममा मधेसी जनताको सहभागिता छैन । अधिकांश जिल्लामा विवाद छ । संघीयताको सिद्धान्त के हो भने संघले प्रदेशलाई समन्वय गर्ने र प्रदेशले स्थानीय तहमा सम्बन्ध राखेर कहाँनेर कस्तो स्थानीय तह, कहाँ स्वायत्तक्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने हो ।
प्रदेशकै सीमांकन नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहको कुरा भइरहेका छन् । ती सबै विवाद निम्त्याउनका लागि भइरहेका छन् । यसरी हेर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष निर्वाचन गराउन चाहन्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । तर, संविधानलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने हो भने निर्वाचन सम्भव छ ।
हामी सधैं राजनीतिक मुद्दामा अल्झँदा देशको अर्थतन्त्रचाहिँ धराशायी बन्दै गएको छ । किन राजनीतिकर्मीहरूको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ जान नसकेको हो ?
जनतालाई पहिचानको समस्या हुन्छ । राज्यका अंगहरूमा उसको सहभागिता हुँदैन । त्यतिबेला कुनै पनि देशको सन्तुलित विकास अघि बढ्न सक्दैन । नेपालका सबै परिवर्तनका लागि के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली सबै जनताले सहयोग गरे । देशको आर्थिक अवस्था उक्सन्छ भन्ने आशमै सबै जनता आन्दोलनमा सहभागी भए ।
आफ्नो अधिकार स्थापित हुने र देश विकासको गतिमा जाने विश्वास उनीहरूको थियो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली जनता आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न आन्दोलित हुनुपरेको छ । अहिलेसम्म देशविकासको रणनीति, विदेश नीति, अर्थनीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएका छैनन् ।
खालि हामी राजनीतिक कुरामा अल्झिएका छौं । तर, राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा हामी राजनीतिलाई आर्थिक समृद्धिमा जोड्न चुकिरहेका छौं । अहिले उठिरहेका सबै राजनीतिक समस्या सुल्झाएर अघि बढ्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुक आर्थिक विकासको पथमा अघि बढ्छ ।
हामी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक मुद्दा हल गरेर देश विकासको रणनीति बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालको विकासमा विदेशी राष्ट्रहरू सहयोग गर्न तयार छन् । तर, सहयोगलाई भीखका रूपमा लिनु हुँदैन । हामीले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ । कसैलाई राष्ट्रघाती भन्नु, कसैलाई अधिकार माग्नेबित्तिकै विखण्डनवादी भन्ने र हामीबीचको एकता टुक्र्याउने षड्यन्त्र हो ।
त्यसप्रति हामी सजग हुनुपर्छ । मधेस, पहाड र हिमालका जनताले एक–अर्काको पहिचान, अधिकार स्वीकार गरेर हामीले देशलाई विकासको बाटोमा अघि लैजानुपर्छ । उग्र राष्ट्रवादले मुलुक बन्न सक्दैन । अरूको अपमान गरेर देशमा स्थिरता हुँदैन । अस्थिरता नै देश विकासको बाधक हो । त्यसैले राजनीतिक समस्या समाधान गरेर सबै नेपाली जनता एक भएर देशलाई समृद्ध बनाउने दिशमा अघि बढ्नुपर्छ ।
मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी राष्ट्रियता